Fihaonana amina entana marobe isian'ny fifanoherana.
Home Products DataNumen Exchange Recovery Fihaonana amina entana marobe isian'ny fifanoherana
Fihaonana amina entana marobe isian'ny fifanoherana ao amin'ny takalo OST File
Mihaona amina zavatra marobe amin'ny fifanoherana ao aminao ianao fampirimana ivelan'ny seranana (.ost) fisie.
Ity hadisoana ity dia midika hoe anao OST simba na simba ny fisie.
Mba hamahana ity lesoka ity sy hisorohana ny fahaverezan'ny angona dia araho ireo dingana etsy ambany:
Avereno indray ireo angona ivelan'ny Internet ao amin'ny OST hametraka. The OST Ny rakitra dia misy tahirin-kevitra ivelan'ny Internet, ao anatin'izany ny mailaka sy ny zavatra hafa rehetra, ao amin'ny boaty mailakanao Exchange, izay an'ny most zava-dehibe aminao. Mba hamonjy ireo angona ireo dia tsy maintsy atao izany fampiasana DataNumen Exchange Recovery mba hanaovana scan ny maloto OST rakitra, avereno ny angon-drakitra ao anatiny, avy eo tahirizo ao anaty rakitra Outlook PST tsy misy hadisoana hahafahanao miditra amin'ny mailaka sy mahomby amin'ny mailaka sy entana rehetra ao anatin'ny Outlook.
Amboary ny lesoka. Hamarino tsara fa marina ny fikirakirana kaonty mailaka Exchange ao amin'ny Outlook, ary afaka mifandray amin'ny server Server Exchange ianao. Avy eo restart Outlook ary andefaso / raiso ny mailakao amin'ny boaty mailaka Exchange mifandraika amin'izany, izay hamorona Outlook vaovao OST manaova rakitra ho azy ary ampifanaraho amin'ny boaty mailaka ao amin'ny mpizara Exchange ny data raha tsy mandeha ity fomba ity dia tsy mety ny mombamomba anao ankehitriny, tokony hamafana izany ianao ary hamorona vaovao, toy izao:
Ampidiro ao amin'ny dingana 3 ny angona. Aorian'ny anao OST raikitra ny olan'ny rakitra, tazomy ilay vaovao OST fisokafana ny boaty mailaka Exchange, ary sokafy ny rakitra PST novokarina tamin'ny dingana 3 miaraka amin'i Outlook. Satria mirakitra ny angon-drakitra voaverina rehetra ao amin'ny tany am-boalohany OST rakitra, azonao atao ny maka tahaka ireo zavatra ilaina amin'ny vaovao OST hametraka.